Iikhemikhali zeOrganic, uboya, isiQinisekiso sobushushu-iTekhnoloji yeNew Energy ye-Shuiyuan
I-Shenxian Shuiyuan entsha yeThekhnoloji yezaMandla Co, Ltd. eyasekwa ngo-2000, ibekwe kwiphondo Shandong, thina mveliso umenzi ezikhethekileyo kwimveliso Dibenzoylmethane (DBM) kunye furfural. Njengenye yezona mveliso zinkulu zehlabathi zeDibenzoylmethane (DBM) mveliso onomthamo wonyaka weetoni ezili-10 000, njengenye yezona mveliso zinkulu ehlabathini ezinomthamo wonyaka weetoni ezingama-30,000.
Sinyanzelisa umgangatho wemveliso kwindawo yokuqala kwaye ngokungqongqo liliso kumgangatho wemveliso yenkqubo nganye.
Umzi mveliso wethu ukhule waba yinkulumbuso umenzi we-dibenzoylmethane kunye ne-furfural.
Yasekwa ngonyaka ka-2000, thina mveliso umenzi ezikhethekileyo kwimveliso Dibenzoylmethane (DBM) kunye furfural.
I-Shenxian Shuiyuan entsha yeThekhnoloji yezaMandla Co, Ltd. eyasekwa ngo-2000, ibekwe kwiphondo Shandong, thina mveliso umenzi ezikhethekileyo kwimveliso Dibenzoylmethane (DBM) kunye furfural.
152020 / Agasti
132020 / Agasti
122020 / Agasti